Waddo ku taalla Magaalada Muqdisho oo muddo xirneyd oo la furay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Maanta muddo kadib furtay wadada hormarta Xarunta Hay’adda dembi baarista CID-da oo dhaxgaan ugu xirneyd, taas oo ku taalla agagaarka Isgoyska KM-4 ee Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka.
Afhayeenka Ciidanka Booliska dowladda Sadiiq Aadan Doodishe oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in qeybtii wadada uga xirneyd Xarunta CID-da loo furay Cabasho ka timid shacabka isticmaala wadadaas oo dhibaato ku qabay maristeeda.
Waxaa uu sheegay Afhayeen Sadiiq Aadan in markii Xarunta hay’adda CID-da wadada u xiratay sababo la xiriira dhinaca amniga, hayeeshee waxaa uu sheegay in haatan la go’aansaday in dib loo furo.
Sidoo kale Afhayeenka Ciidanka Booliska ayaa tilmaamay in la furi doono waddooyinka kale ee ku yaalla Caasimadda, isla markaana u xiran hay’addo ama shaqsiyaad gaar ah, wuxuuna caddeeyay in marnaba aan la aqbali doonin in waddooyinka iska xirnaadan.
Ugu dambeyn Ganacsatada iyo shaqsiyaadka kale ee u xiran waddooyinka ayuu ugu baaqay Afhayeenka Ciidanka Booliska dowladda Federaalka inay furaan wadada, si ay u fududaayan isku socodka gaadiidka ka shaqeeya Caasimadda.